बिन्दुहरू सङ्कलन गर्नुहोस् र अंकहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
डीएचएल देखि कोड जाँच
कोड ईएमएस जाँच
THB अमेरिकी डलर युरो GBP
सुरक्षा धूलो र रसायन
सूट उचाइबाट आउँछ।
जूता सहायक उपकरणहरू
डाक्टर लागि चश्मा
फिर्ता समर्थन बेल्ट
चिकित्सा र नर्सिङ जूताहरू
उच्च वोल्टेज जूता
तपाईं फिर्ता गर्न सक्नुहुनेछ वा 14 दिन भित्र उत्पादन परिवर्तन गर्नुहोस् यदि उत्पादन लेबल गरिएको छैन भने। र यो प्रयोग गरिएको छैन। यदि तपाइँ एक मिति पछि आउनुभयो भने। कम्पनीलाई रिटर्न वा ग्राहकलाई ग्राहक परिवर्तन गर्न अधिकार सुरक्षित गर्दछ।
1 र यो प्रयोग गरिएको छैन। लिपि वा प्लास्टिक लपेटोहरू पीडा नरोक्नु पर्छ। उत्पादन मूल प्याकेजमा हुनुपर्दछ।
2। हामी परिवर्तन गर्न वा केहि उत्पादनहरू फर्काउन चाहन्छौं जुन मान्छे सामान्यतया यस्तो जूता, कपडा, अनुहार, कान, मफ आदि जस्ता साझा गर्दैनन्। पसलले कुनै पनि मामला परिवर्तन गर्न अस्वीकार गर्यो।
निम्न प्रकारका सामानहरू सहित।
- वाउचरहरूद्वारा खरिद गरिएका उत्पादनहरू।
- विशेष डिस्काउंट प्रमोशन
- साझा स्वास्थ्य सम्बन्धी उत्पादनहरू संक्रामक हुन सक्छन्।
3 पसलले रसिदको प्रमाण माग्दछ। कृपया वस्तुसँग रसीद ल्याउनुहोस्।
4 कृपया उत्पादनहरू पठाउनुहोस् जुन प्रतिस्थापन गरिनेछ वा कारखाना वा अर्को कम्पनीमा फर्कनुहोस्। यदि तपाई आफैंलाई फिर्ता फिर्ता पठाउनुहुन्छ।
5। दावी वा फिर्ता हुने उत्पादनहरू सम्पर्क पछि7दिन भित्र भण्डारमा पठाइने छ। अन्यथा, हामी दावी वा ग्राहकलाई कुनै पनि अवस्थामा दावी गर्दैनौं।
फिर्ता वा प्रतिस्थापन
यदि तपाईं मापदण्ड जाँच गर्नुहुन्छ भने। हामी तपाईंलाई ईमेल, फोन, वा ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्नेछौं। यदि उत्पादन मापदण्ड पूरा गर्दैन। हामी पनि फर्किन पनि द्रुत हुनेछौं।
1 ग्राहकहरूलाई पैसा फिर्ता गर्नेछ। यदि ग्राहकले नगद भुक्तानी गर्दछ। हामी फिर्ता रकम स्थानान्तरण गर्नको लागि सम्पर्क गर्नेछौं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकहरू। ทางร้านจะคืนเงินให้อัตโนมัติภายใน 14 วัน โดยผ่านช่องทางที่ทางลูกค้าได้จ่ายผ่านบัตรมา
2। यदि ग्राहकले ढिलो रकम फिर्ता गर्छ वा रकम फिर्ता नगरेको छैन भने।
उत्पादनहरू यसले परिवर्तन गर्नेछ। नियमित मूल्य हुनुपर्दछ। यदि ग्राहकहरू विशेष मूल्यहरूमा उत्पादहरू खरीद गर्छन् भने हामी उत्पादनहरू वा फिर्ती परिवर्तन गर्न अधिकार सुरक्षित छौं।
यदि तपाईंको वस्तु उपहारको रूपमा पठाइएको छ भने। यदि तपाईँ आकार परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने। उत्पादन परिवर्तन गर्नुहोस् हामी फिर्ता रकम वा निर्दिष्ट शिपिंगमा वस्तु विनिमय गर्नेछौं। यदि हामीले यसलाई पठाउनु पर्छ भने। मलाई तपाईलाई अलर्ट गर्न ईमेल छ। हामी पहिले नै फर्केका छौं।
ถ้าหากสินค้าไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นสินค้าที่เป็นของขวัญตอนที่ซื้อไป เราจะคืนเงิน หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ प्रतिस्थापन वा फिर्ती मा प्राप्तकर्ता एउटा सूचना।
कृपया Pied Bueng Lam Luk Ka, Pathum थानी, थाईल्याण्ड 42 बीच 11 /612150 फर्कनुहोस्।
ग्राहकहरू फिर्तीको लागत, परिवर्तन वा दावीको लागि जिम्मेवार छन्। हामी शिपिंग लागतको लागि जिम्मेवार हुनेछैनौं। यदि तपाइँ एक उत्पादन फिर्ता गर्न वा एक उत्पादन परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने। हामीले ढुवानी शुल्क वा अतिरिक्त शिपिंग शुल्क कटौती गर्नुपर्नेछ।
दूरी, ढुवानी ठेगानामा निर्भर गर्दछ। हुलाक को समय डाक दूरी को आधार मा भिन्न हुन सक्छ।
के तपाईं सुनिश्चित गर्न ईएमएस द्वारा कुरा ढुवानी 1,000 गर्नुपर्छ भन्दा बढी लागत एक उत्पादन छ भने मेल हानि लागि बीमा क्षतिपूर्ति भनेर। หากสินค้าถูกตีกลับเนื่องจากท่านไม่ได้อยู่ที่บ้าน หรือ ทางไปรษณีย์ได้ไปตามที่อยู่จัดส่ง तर प्राप्तकर्ता घरमा छैन। उत्पादन फिर्ता हुन सक्छ हामी यो खण्ड मा खर्च लागि जिम्मेवार छैन।
अर्डर स्थिति जाँच गर्नुहोस्
नियम र विनियम
© 2018 บริษัทเหลืองรัศมี จำกัด. ลิขสิทธิ์ โดย LRMsafety.com. सबै अधिकार सुरक्षित
लग इन गर्नुहोस् तपाईं को लागि शीर्ष रुचि हेर्न!
केही आफ्नो तर्फबाट पोस्ट गरिनेछ।
सुरक्षित द्वारा संचालित
शीर्ष रुचि लोड...
मित्र रोज्न ...